DOWNLOAD Monument Valley - Arizona-Utah border MSFS 2020
Monument Valley, ity misy toerana mistika, angano, tsy manam-paharoa ary tsy hay hadinoina ... Afaka maka sary an-tsaina ny tenanao ao am-pon'ny tandrefana lehibe iray ianao! Any afovoan-tanin'ny Indiana Navajo. Ity lohasaha ity dia nijanona ho tsy fantatra ary milamina am-polony taona maro.
Monument Valley dia miorina eo amin'ny sisin-tany manasaraka an'i Arizona sy i Utah any Etazonia, Mahatalanjona izy noho ny fiforonany geomorphological izay miavaka indrindra amin'ny mesas sy Buttes.
Ny toerana dia novaina mba hifangaro amin'ny fonosana fanavaozana USA World ("USA - POINTS OF INTEREST"), na izany aza, misy 3D Buttes (vato) mifanohitra amin'ity fonosana ity, izany no antony auto-installer dia hanome anao safidy roa.
Raha tsy apetraka ny fonosana default "USA - POINTS OF INTEREST" dia aleo apetraka ny safidy 1, raha tsy izany dia apetrak'ilay safidy 2 ny firafitry ny toerana sy ny zavatra 3D tsy misy 3D Buttes (satria efa eo ireo " USA - POINTS OF INTEREST ").
Azafady mba mariho fa faritra fotodrafitrasa 3D lehibe ity ary noho izany dia hitombo ny fotoana fandefasana simulator. Raha tsy mikasa ny hisidina amin'ity faritra ity ianao dia tsara ny manaisotra ny toerana mandra-manapa-kevitra ny hisidina amin'ity faritra ity indray.
Downloads 1 292
Format Namboarina tamin'ny fampiasana photogrammetry 3D
Ity fonosana ity dia noforonin'i Jeppeson2001